काठमाडौं। दुनियाँमा मानिसहरुका आ-आफ्नै साथी भाइ र ईष्ट मीत्र हुन्छन्। कोही मानिसहरु अन्य मानिससँग छिट्टै घुलमेल हुन्छन्। भने कोहि कम हुन्छन्। शास्त्र अनुसार केहि मानिसको आ-आफ्नै ग्रह र नक्षत्र हुन्छन्। त्यसैले ति ग्रह नक्षत्रले मानिसको कुण्डलीमा प्रभाव पार्छ। जसले मानिसहरुको जिवनमा समेत प्रभाव पारेको हुन्छ।
यस्तै नक्षत्रको आधारमा नै हरेक मानिसको राशि फरक-फरक हुने गर्छ। फरक-फरक राशिकै आधारमा मानिसहरुको स्वाभाव हुन्छ। राशिकै आधारमा मानिसहरु कोहि अन्य मानिससँग घुलमेल हुन रुचाउछन्। भने कोहि मानिस एक्लै बस्न रुचाउछन्। त्यसैले आज हामी तपाईहरुलाई धेरैजसो एक्लै बस्न रुचाउने राशिको बारेमा जानकारी दिन गइरहेका छौं।
२. कन्या राशि : यी राशी भएका मानिस लजालु स्वभावका हुन्छन किनकि यो राशिमा ग्रह नक्षत्रको धेरै प्रभाव पर्छ। यिनीहरुलाई आफ्नै दुनियामा मस्त रहन मन पराउछन्। यी राशि भएका व्यक्तिलाई आफ्नो घर बाहेक अन्त बस्न मन पर्दैन।
३. मकर राशि : मकर राशि भएका मानिसलाई एक्लै बस्न मनपर्छ। यी राशि भएका मानिस अरुसंग घुलमिल हुन त्यति रुचाउदैनन्। किन कि यी मानिसको स्वभाव लजालु हुन्छ। यी राशिकफुले पहिलादेखि नै चिनेको व्यक्तिहरुसँग बस्न रुचाउछन्।
४. मिन राशि : एक्लै बस्नु यी राशी भएका व्यक्तिको सबै भन्दा ठूलो बल हो। यीनीहरु दिनमा पनि सपना देख्छन् र आफ्नै दुनियाँमा हराउछन्।
लकडाउनमा १ सय १ किलो तौल बढेपछि…